Cishe wonke umuntu lapho kuqala kweminyaka ethize zingavela induna. Lezi izivakashi kuphazamiseke ngempela kusukela ukubukeka futhi abakhulule eziningi ngokungalungile, kodwa ngemva ukususa kubo ekuseni ukujabula. Ngokuvamile nezinduna ushiye ukukhubazeka yezimonyo kwesikhumba, kuyiphi indlela yokuphunyuka kunzima nakakhulu - AMANXEBA induna.
Ukwelashwa kudinga isineke futhi ukusetshenziswa njalo izimali. Kodwa-ke kumele kusetshenziswe, uzama ingxabano ngokushesha ngangokunokwenzeka, njengoba AMANXEBA fresh emva induna lula kakhulu ukususa kuka ezingamahlalakhona.
Ukuze uqale, zama ukuvimbela ukwakheka induna entsha. Ungalokothi ulale nge izimonyo, ngigeza ekuseni kusihlwa futhi ake umuntu ukuphumula. Lokhu kusiza hhayi kuphela ahlanze isikhumba, kodwa futhi emnika ithuba alulame. Landela ngokudla ngendlela efanele, ungadli ebusuku, ungahlukumezi emaswidi ikhofi. Kunzima ukubhekana izibazi zakudala ku isizinda izilonda entsha. Gwema izimo ezibangela ukucindezeleka, okuyinto ingenye yezimbangela ezinkulu induna, futhi okubaluleke kakhulu, musa ngawakhamela, ukuze aphathe kubalulekile ukuba ningabi nje kuphela induna izibazi ekhona, kodwa elalisanda kumiswa.
Uma une izibazi fresh emva induna, ekwelapheni amakhambi abantu ngeke kube nemiphumela ekahle kakhulu, kodwa futhi kwenzeka nezibazi ubudala, kungasiza ukuqeda kubo. Omunye amathuluzi amahle kakhulu kuleli cala - buso ka ubumba eluhlaza. Kulula kakhulu ukwenza, nobumba angathengwa ngasiphi ekhemisi. Thatha lemali edingekayo ngobumba mix it ngamanzi ehlungiwe kuze mass obukhulu on ukungaguquguquki yayo efana ukhilimu. Khona-ke, phezu kobuso zangaphambi azihlanzile nentamo, ukusebenzisa le ngxube futhi ushiye imizuzu eyishumi nanhlanu. Ngemva hashaza ngamanzi afudumele futhi sisebenzise amafutha okuthambisa isikhumba. Ngo imaskhi, ungakwazi ukwengeza namafutha e-rosemary, tea tree noma peach, ezithinta isinqandakuvunda, ukupholisa izakhiwo elihlanza. Okuhle Ukuthi sihlanganise ngayo ikhambi uwoyela vitamin E. Nguye abagqugquzela sokuvuselela amahle kokuzalwa ngcono ukubonakala, zivikela imiphumela emibi futhi antioxidant zemvelo.
Uma une izibazi ezijulile futhi osekukade emva kokwelashwa induna kungaba kwenziwe usebenzisa sandalwood powder. Lelisu liphinde likhuthaze kokuzalwa ekuthuthukiseni kwegazi futhi ukukhuthaza umzimba. It ixubene ezingxenyeni alinganayo nge amanzi rose futhi isetshenziswa isikhathi eside. Okuhle ukwenza inqubo efanayo endaweni ababezolala kuyo ebusuku. Ezinsukwini ezimbalwa nje, ungakwazi kakhulu ukunciphisa induna izibazi. amakhambi abantu Ukwelashwa kuhlanganisa isicelo esinjalo izitshalo owaziwa ezifana Aloe, lavender nelithi ulamula. Wonke umuntu uyazi ukuthi indlela engcono kakhulu ukuqeda izinkinga lapho sihlala esikhunjeni. Lombhalo ucashunwe ebhukwini yalezi izitshalo ingasetshenziswa njengesilwane izindlela ezimele noma azihlanganise buso ezahlukene kanye okhilimu. Isiza ngokushesha futhi ukulolonga sokuvuselela isikhumba, elihlanza, ukunciphisa ukuvuvukala, futhi phakathi amathuluzi lokuqala ekulweni nenkinga efana induna izibazi.
Ungakhohlwa ukuthi ukubhucungwa isikhumba kunomthelela kahle liyokwazi ukusimama. Beka iminwe yakho yamafutha kancane futhi uhlikihla ezindaweni inkinga. Le nqubo kumele kwenziwe nsuku zonke kuze kube yi oyifunayo. Kuhle kakhulu ikhukhamba buso, futhi lokhu Mash ikhukhamba a uginindela isicelo ebusweni imizuzu amabili. Lokhu imaski akuyona ngokuphelele kuphela moisturizes, kodwa futhi regenerates kahle isikhumba. Futhi khumbula ukuthi ukuze uthole yalokho okuhle, ukuphathwa okufanele kwenziwe nsukuzonke. Isici esibaluleke kakhulu lapha isimo izibazi kanye nobudala yomuntu.
Imiyalelo on ekwelapheni ezimbonini: isibonelo. Kutfutfukiswa imiyalelo sokusingatha ezimbonini